EU: Midawga Yurub oo sheegay in ay xiriirka u jarayaan dawlada Xasan Shiikh Maxamuud hadii aan la meel marin doorashada 2016
War deg deg ah oo hadda ka soo baxay Midowga Yurub, kuna saabsan arrimaha Soomaaliya ayaa si adag loogu sheegay in ay Midowga Yurub xariirka u jarayaan dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, hadii aan meelmar laga dhigin qodobadii Heshiiska madasha Wadatashigu ay gaareen bishii April ee lasoo dhaafay, kuwaas oo dhabaha nooca ay noqonayso doorashada Soomaaliya.
Midowga Yurub waxay sheegeen in maalmihii ugu dambeeyey ay dadaal ugu jireen sidii loo meelmarin lahaa qodobadaas, balse ay jiraan caqabado ka yimid Madaxda dawladda Faderaalka qaarkood iyo baarlamaanka, kuwaas oo halis galinaya doorashada dalka.
EU-du waxay ku hanjabtay in aysan waxba cilaaqaad ah la yeelaneyn Madaxda dawladda Faderaalka, haddii aan sida ugu dhaqsaha badan loo ansixin qodobadaas oo aan hirgalintooda lagu dhaqaaqin.
Isla qoraalka waxaa si cad loogu sheegay in ay Madaxda dawladda Faderaalka & Xildhibaanada qaarkood ay doonayaan in ay mudo dheeraysi sameystaan, arrimaha socdana ay yihiin kuwa siyaasadeed oo xukunka lagu sii heysanayo, taasna aysan raali ka noqon doonin Beesha Caalamka, gaar ahaana Midowga Yurub.
Midowga Yurub waxay sheegeen in ay joojin doonaan wax kasta oo ay ku bixiyaan howlaha dawladda Faderaalka ay ka wado gudaha Soomaaliya, iyadoo dhawaan la dhimay 20% lacagihii lagu bixin jirey dhanka ciidamada AMISOM.
Ilaa hadda dawladda Faderaalku waxba jawaab ah kama aysan bixin hadalka ka soo baxay Midowga Yurub oo ah mid halis galinaya mashaariic badan oo ay wadeen Midowga Yurub.
Tanni waa qeyb ka mid ah ciqaabaha la marin doono Madaxda dalwadda Faderaalka iyo Xildhibaanada diidan meelmar in laga dhigo heshiisyadii Madasha Wadatashiga ee Habraaca doorashada 2016-ka.